Izinyathelo eziya e-Ocean Retreat - I-Airbnb
Izinyathelo eziya e-Ocean Retreat
Ikamelo e-ifulethi ibungazwe ngu-Margaret
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Margaret izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-LOHA! Indawo yami iqhelelene ne-Carlsmith Beach Park ebuye yaziwe nge-Turtle Beach lapho ungazulazula khona ngezimfudu zase-Pacific. Futhi kuqhele ngamaminithi angu-5 ukusuka epaki yase-Richardson beach indawo ephambili ye-snorkeling. I-lanai yami ibheke ihlathi elinemvula. Imizuzu eyi-10 ukuya edolobheni laseHilo, kanye nemizuzu emi-5 ukuya esikhumulweni sezindiza. Muva nje ukukhanya kwe-Kilauea lava kungabonakala endaweni yami.
I-Hilo ine-Imiloa Astronomy Centre, amagalari amabili obuciko edolobheni neyodwa eseVolcano Park kanye nezimyuziyamu ezimbili. Kukhona ulwandle lwesihlabathi esimnyama imayela elilodwa ukusuka. Ulwandle lapho ngihlala khona luhle kakhulu ngokudlala i-snorkeling nokubuka isihloko. Kukhona ulwandle lwesihlabathi esimnyama e-Pahoa futhi isihlabathi esiluhlaza sithwala iphuzu eliseNingizimu, Kukhona ulwandle olusha lwesihlabathi lwasemuva e-Pahoa kanye nolwandle lwesihlabathi esiluhlaza.
4.57 out of 5 stars from 273 reviews
4.57 · 273 okushiwo abanye
Izinga lokuphendula: 64%